यो वर्ष परीक्षा नभई मूल्याङ्कनबाट मात्र विद्यार्थीलाई कक्षा चढाइने ! « Bagmati Online
यो वर्ष परीक्षा नभई मूल्याङ्कनबाट मात्र विद्यार्थीलाई कक्षा चढाइने !
काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण घरमै रहेर वैकल्पिक माध्यमबाट सिकिरहेका विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई यो शैक्षिक शत्रमा परीक्षाभन्दा मूल्याङ्कन गरेर कक्षोन्नति गरिने भएको छ ।
पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचाअनुसार खासगरी तीन प्रकारको मूल्याङ्कन हुनेछन् । एउटा निरन्तर, दोस्रो प्राक्टिकल र तेस्रो प्रमाणीकरण मूल्याङ्कन । यसमा ‘टेक्स्ट’ (पाठ्यवस्तु) र ‘कन्टेक्स्ट’ (परिवेश)मा आधारित प्रश्न सोध्न सकिनेछ । गृहकार्य, परियाजना कार्य, साना समूहमा विभाजन गरी प्रश्न राख्ने, टेलिफोनमार्फत् सोध्ने, अनलाइन प्रविधि आदि विधिबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिने बताइएको छ । पाठ्यक्रमका निर्देशक भट्टराईका अनुसार सामान्य अवस्था जस्तो तेस्रो त्रैमासिकसम्मको परीक्षा लिने नभई जम्मा दुईपटक विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिनेछ । पहिलो मंसिरको अन्तिम साता र अर्काे चैतको पछिल्लो हप्ता मूल्याङ्कन गरिनेछ । विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ ले पनि मूल्याङ्कन, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणसम्बन्धी उल्लेख गरेको छ । यसका लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक र एकजना स्थानीय विज्ञ सम्मिलित समितिले काम गर्ने उल्लेख छ ।
सत्यवती मावि धादिङका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण शर्माले ४० प्रतिशत विद्यार्थीको व्यवहार, सञ्चार तथा क्रियाकलाप र ६० प्रतिशत पेन्सिल पेपरका आधारमा आफ्नो स्कूलबाट मूल्याङ्कन गरिने बताए । उनले विद्यार्थीको क्रियाकलापहरुको भिन्नाभिन्नै पूर्णाङ्क राखिएको निर्धारण सूचीसमेत प्रस्तुत गरे । यद्यपि, सो सूचीमा केही कमजोरी रहेको औंल्याउँदै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक भट्टराईले भने सबै तहमा ४०–६० को मूल्याङ्कन पाठ्यक्रमविपरित हुने बताए । कक्षागत आधारमा निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति र पेपर पेन्सिल मूल्याङ्कन ५०–५० प्रतिशत हुनुपर्ने उनको सुझाब छ ।
लेकबेंसी नगरपालिकास्थित चन्द्रपुर मावि सुर्खेतकी प्रधानाध्यापक हरिमाया कोइरालाले दुई तरिकाले सिकाइ मूल्याङ्कन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । ‘एउटा होमवर्क विधि र अर्काेचाहिँ रोल नम्बरका आधारमा दूरी कायम गरी परीक्षा लिने,’ उनले भने, ‘होमवर्क विधिमा नमूना प्रश्नपत्रहरुको सेट दिने र दुई हप्ता पछि जम्मा गरेर मूल्याङ्कन गर्ने ।’ शिवपुरी मावि काठमाडौंका प्रधानाध्यापक दिवाकर दूरदर्शीले कक्षा १–३ लाई भाइवा लिने र ४–७ सम्मका विद्यार्थीलाई गुगल मिटबाट पढाउने व्यवस्था गरेको बताए । उनले गुगलमिटबाट गुगल फारम प्रयोग गरिएको र सबै शिक्षकलाई यस माध्यमबाट परीक्षा लिनेबारे तालिम दिइएको जानकारी दिए । ‘डमी एक्जाम लिँदा हामी सफल पनि भयौं तर गणितमा केही अफ्ठ्यारो हुँदो रहेछ,’ दूरदर्शीले भने ।
कार्यक्रममा सहभागी नानीराम सञ्जेलले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी लकडाउनसँगै ठूलै संख्यामा स्कूलको सम्पर्कमा नआएको अवस्थामा तिनलाई पत्ता लगाएर कसरी परीक्षा दिलाउने भनी प्रश्न राखे । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत चैतबाट देशभर विद्यालय बन्द भएपछि २०७७ असार १ गतेबाट सरकारद्वारा लागू गरिएको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाअनुसार विद्यार्थीले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा स्वाध्याय सामग्रीमार्फत् सिक्दै आएका छन् । सोही निर्देशिकालाई संशोधन गरी गत भदौ १९ मा जारी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ यही असोज १ गतेबाट लागू गरिएको अवस्था छ ।